एसियन लाइफको ९८ हजार कित्ता सेयर लिलामी खुल्यो, कहिले सम्म दिने आवेदन ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > एसियन लाइफको ९८ हजार कित्ता सेयर लिलामी खुल्यो, कहिले सम्म दिने आवेदन ?
काठमाडौं । एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले आज जेठ १० गते देखि सर्वसाधारण समूहको ९८ हजार २४६.२० कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याएको छ । यसमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुनुपर्ने छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल लाजिम्पाट काठमाडौं सहित यसका लालदरबार, लगनखेल, पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज र विराटनगर शाखाबाट बोलपत्र फारम भर्न र बुझाउन सक्नेछन ।
यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सुर्खेत, नेपालगञ्ज, नारायणगढ र धनगढी शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । न्यूनतम १०० कित्ता देखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइन्छ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद जेठ १७ गते तोकिएको छ । एसियनले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्दा नबिकेको सेयर लिलामी मार्फत बिक्री गर्न लागेको हो ।
एसियन लाइफले जेठ १९ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभामा ४ प्रतिशत बोनस सेयर र यसपछि कायम हुने १ अर्ब २५ करोड ६७ लाख २५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले ३ करोड २२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
२०७५ जेष्ठ १० गते १०:२२ मा प्रकाशित
नुवाकोटमा नेपालकै पहिलो अपांगमैत्री पुस्तकालय निर्माण
तोकिएकै समयमा योजना पुरा नभए कार्वाही : प्रधानमन्त्री ओली
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत
अब ७५ जिल्लाका स्थानीय तहबाटै सेयर खरिदबिक्री हुने !
मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधादेखि प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्नेसम्म, यस्तो छ प्रदेश नम्बर ३ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय